Fannaanka Nimcaan Hillaac oo xil dowladeed loo magacaabay | Hadalsame Media
Home Wararka Fannaanka Nimcaan Hillaac oo xil dowladeed loo magacaabay
Fannaanka Nimcaan Hillaac oo xil dowladeed loo magacaabay
(Muqdisho) 11 Juun 2019 – Wararka Hadalsame soo gaaraya ayaa sheegaya in wareegto ka soo baxday xafiiska Wasiirka Warfaafinta Soomaaliya, Maxamed Cabdi Xayir (Maareeye) uu maanta oo ay taariikhdu tahay 11/06/2019 loogu oggaaladay in uu kamid noqdo Hoballada Waaberi , Nimcaan C/raxmaan Xasan, (Hillaac).
Isla mar ahaantaa, warqaddan kasoo baxday Xafiiska Wasiirka Warfaafinta ayaa sidoo kale waxaa Nimcaan C/raxmaan Xasan, loogu magacaabay in uu noqdo, Agaasimaha wax soo saarka iyo Howl gelinta Hoballada Waaberi.
Wasiirka Warfaafinta, ayaa isla wareegtadan xilkii Agaasimenimo uga qaaday Agaasimihii hore ee wax soo saarka iyo howl gelinta Hoballada Waaberi , Maxamed Xasan Barroow oo jagadaa horay ugu magacownaa.
Agaasimihii hore ee wax soo saarka iyo howl gelinta Hoballada Waaberi ayaa loo magacaabay in uu noqdo la taliyaha wasaaradda warfafainta dhaqanka iyo dalxiiska ee arrimaha horumarinta Fanka iyo isku xidhka Kooxaha heer Qaran.
Previous articleDHEGEYSO: Laba qarax oo xalay ka dhacay magaalo ay Soomaali badani deggan tahay! + Sawirro
Next articleSomaliland oo soo bandhigtay eedaymo lala yaabay oo loo haysto Cabdimaalik Coldoon